Salphina abbootii murteefi qondaaltota kubbaa miilaa Afriikaa - BBC News Afaan Oromoo
Salphina abbootii murteefi qondaaltota kubbaa miilaa Afriikaa
8 Waxabajjii 2018
Qondaaltonni kubbaa miilaa Lixa Afirikaafi Keenyaa dhibba tokkoo ol ta'an osoo qarshii fudhachaa jiranii dhoksaatti kaameraan waraabameen saaxila ba'an.
Qorannoon kun qaama hordoffii waggoota lamaaf dhoksaadhaan Gaazexeessaa lammii Gaanaa Anas Aremayaw Anas'tiin gaggeeffamaa turedha.
Waraabbii dokumentaarii isaanii kan dhiyeenya kanaa akka addaatti argachuu danda'es sagantaa dokumentarii 'BBC Africa Eye' qofaadha.
Gargaaraa abbaa murtee Waancaa Addunyaa 2018 ta'uun kan barame, abbaa murtee lammii Keeniyaa tokko nama qondaala garee piriimershiippii Gaanaarraa akka dhufe fakkaate itti dhiyaaterraa doolaara dhibba ja'a ennaa fudhatu waraabame.
Fifa'n akka jedhutti, Aden Range Marwa, abbootii murtee Waancaa Addunyaa Afriikaa keessaa tokko kan ta'e, erga 'kennaa' $600 osoo fudhachaa jiruu waraabamee akka Raashiyaa hin deemne ta'eera.
Marwa'n gabaasaa qondaala ol-aanaa kubbaa miilaa Gaanaa fakkaachuun dhiyaateen qarshiin keennameeraaf fudhateera, inni garuu dogoggora tokkoyyu akka hin hojjenne haaleera.
Miseensa Mana Maree FIFA fi Pireezidantii Waldaa Kubbaa Miilaa Gaanaa kan ta'e Kwesi Nyantakyi, kubbaa miilaa Afirikaa keessatti nama jabaa sadarkaa lammataati, innis hordoffii dhoksaa kanaan saaxilameera.
Gaabaasaa nama kubbaa milaa Gaanaa keessatti investara ta'uu barbaadee tokko fakkaachuun dhiyaaterraa dolaara kuma jaatamii shan fudhaachaa osoo jiruu waraabame.
Nyantakyi'n kanarratti yaada kennuu ni dide.
Goodayyaa suuraa Eenyummaan gaazexeessaa qorannoo kana hojjetee hin beekamu
Walumaa galatti, abbootii murteefi qondaaltonni ol-aanoo dhibba tokkoo ol ta'an seeraawwan FIFA fi Waldaa Kubbaa Miilaa Gaanaa kallattiidhaan cabsuudhaan osoo maallaqa fudhatanii kaameraadhaan saaxilamaniiru.
Dokumentaariin gaazexeessaa qorannoo Anas Aremayaw Anas, gaaffiiwwan jajjabboo waa'ee uumama tapha jaallatamaa ardii kanaa kaaseera.
Murtee Waldaa Kubbaa Miilaa Gaanaa
Pireezidantiin Waldaa Kubbaa Miilaa ishee dokumantariin kana keessatti osoo qarshii fudhatuu erga waraabamee booda Gaanaan Waldaa Kubbaa Miilaa biyyalessaa ishee diigdee jirti.
Ministirii Ispoortii biyyattii Iyizaak Asiyaama waldichi battala akka diigamu taasifamuu dubbateera jechuun 'GhanaWeb' gabaaseera.
Qaama yeroof waldicha bulchu dhiyeenyatti akka ifa gootus beeksifteetti.
Qorannoo dabalataa qondaaltota irratti raawwatamu kamiifuu deeggarsa akka kennitus biyyattiin beeksiftee jirti.
Qorannoon harka lafa jalaatiin gaazexeessaa Anas Aremayaw Anas jedhamuun raawwatame kun kubbaa miilaa Afriikaa irratti gaaffii hedduu kaasaa jira.
Waancaa Addunyaa 2018 eenyu akka mo'atu, tapha BBC News kanaan tilmaamaa
6 Waxabajjii 2018
Taphattoota ciccimoo Afriikaa 11 waancaa Addunyaa injifachuu danda'an filadhaa
7 Waxabajjii 2018
Kitaabni Ministira Muummee Abiy Ahimad, 'Ida'amuu', eebbifame
MM Abiy eebba kitaabaarratti qeeqxota isaaniif deebii kennan
Cuukkoon Irreechaaf qophaa'ee ture eessa gahe?
Poolisiin hiriira nagaa magaalaa Maqaleetti taasifamuuf ture bittinse
Astiroonotni Nasa shamarran yeroo duraaf hawaarra tarkaanfatan ta'an
Balaliisaan taatoo beekamaa kutaa balaliisaa keessa seensise umrii guutuuf dhorkame
Namni lubbuun hin jirre dogoggoraan miseensa boordii ta'uun filame
'Warraaqsa Dimookiraasii Ida'amuun bakka buusuuf mari'atamaa jira'
Dhaabbileen 16 seeraan ala dalagaa turan to'ataman